निर्देशक सोभित बस्नेतका बाबुले गरे ३३ वटी बिहे – Kathmandutoday.com
निर्देशक सोभित बस्नेतका बाबुले गरे ३३ वटी बिहे
काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन २३ गते १:१२ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २३ फागुन –एउटा नेपाली पुरुषले बढीमा कतिपटक बिहे गर्न सक्छ ? दुईपटक, चारपटक वा पाँचपटक ? या दर्जनसम्म ? तपाईं यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने अनुमान निकै कम छ । धादिङ, निगालेका कर्णमान सिंह बस्नेतले आफ्नो जिन्दगीमा ३३ पटकसम्म बिहे गरे ।
सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि बास्तविकता भने यही हो । ‘जवानीमा ३३ वटा बिहे गरेँ । अहिले चम्पालाई ल्याएपछि पनि अरु एउटी ल्याएँ । पछि धपाइदिएँ,’ अहिले काठमाण्डुको थानकोटमा स्थायी बसोबास गर्दै आइरहेका ९२ वर्षीय वृद्द कर्णमानसिंहले गर्विलो शैलीमा भने, ‘चम्पालाई बिहे गरेपछि उनको शीलस्वभाव ,माया तथा घरप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा त्यती अन्त मन डुलाउन मन लागेन ।’
उनकी हालकी श्रीमती चम्पा कर्णमानको जीवनमा ३२ औं श्रीमतीका रुपमा आएकी हुन् । चम्पाले भने आफूलाई बिहे गरेपछि पनि श्रीमान्ले अन्य चार जना ल्याएको बताइन् । ‘काजीसँग बिहे गरेपछि मासुभात खान खान पाइन्छ भनेर आउँथे । मैले कुटेर धपाइदिएँ । म आएपछि एउटा विधवालाई बिहे गरेर ल्याएका थिएपछि भगाइयो उनलाई पनि,’ उनले भनिन्, ‘बिहे हुँदा म तेह्र वर्षकी थिएँ । उहाँ ४३ वर्षको बुढो मुस्किलले घर धानेँ ।’
कर्णमान सिंहको पहिलो बिहे १५ वर्षको उमेरमा भएको थियो । बाबुले उनको पहिलो बिहे धुमधामसँग गरिदिएका थिए । बाबुले बिहे गरिदिएकी केटी उनलाई मन परेन । कारण निगालेका बस्नेत काजी कर्णमानसिंह बस्नेतलाई मन परेन भनेपछि परेन, परेन । साह्रै जण्ड स्वभावका थिए रे उनी अनि त बिहे गरेको तीन दिनमै अर्की केटी बिहे गरे ।
बस्नेत चलचित्र निर्देशक, कलाकार शोभित बस्नेतका बाबु हुन् ।